Sirta Kuqorista Liiska Emailka Kireynta iyo Xayeysiinta Wargayska Emailka
Sirta Kuqorista Liiska Emailka Kireynta & Xayeysiinta Warsidaha Emailka
Khamiista, Diseembar 3, 2009 Sabtida, Juun 27, 2015 Scott Hardigree
Xusuusin: Qoraalkan looma qorin milkiilayaasha liiska. Waxaa loogu talagalay xayeysiistayaasha kireysta liisaska emaylka ama ku xayeysiiyaan joornaalada emaylka. Haddii aad tahay xayeysiin leh, ama qorsheynaya, inaad ku darto emaylka 3-aad e-maylkaaga isku-darka suuqgeynta waxay kaa caawin doontaa inaad si aad ah ugu guuleysato kanaalka oo aad u hesho ROI ka wanaagsan, oo leh miisaaniyad yar. Dhamaadka, waxay kaa caawin doontaa liistada liisaska, sidoo kale. Ka dib dhan xayeysiiyaha faraxsan waa xayeysiiyaha soo noqnoqda.
Sannadihii aan ku jiray oo dhan suuq-geynta emailka labadaba emaylka wakaaladda suuq geynta iyo liiska iimaylka dhinaca kirada, waxaan la yeeshay sheekooyin kooban sidan oo kale, waxaanan ku xardhay, “Waan baajinayaa ololahayga sababtoo ah ma helayo wax igu filan [qasabno, hogaamin, iibin, ama natiijooyin kale oo la taaban karo]. ”Xayeysiiyaha ayaa markaa jiidaya ololaha oo ka tagaya isagoo ka niyad jabsan waxqabadka liiska emaylka.
Laakiin sidoo kale waxaa jiray dhacdooyin markii, ka hor inta aan xayeysiiyaha (ama wakaaladooda ama liiska dallaalka) jiidan ololaha, ay diyaar u ahaayeen inay wax yar ka beddelaan oo dib u tijaabiyaan. Iyo kuwa mar uun dareemay niyad jab kadib waxay arkeen horumar degdeg ah oo ku yimid waxqabadka ololaha. Waxaan la wadaagay iyaga hal sir oo isku day-iyo-run ah oo ku saabsan xayaysiinta emaylka guuleysta, oo ah:
La mid dhig shuruudahaaga hal-abuurnimada iyo guusha ee ujeeddada ololahaaga.
Haa. Tani waa suuq-geyn 101, laakiin kuuma sheegi karo inta jeer ee aan arkay in ujeeddada, hal-abuurka, iyo cabbiraadaha guusha gebi ahaanba la khalday. Markay jiraanna, ololuhu meelna ugama dhowaan sida ugu macquulsan ee lagu guuleysan karo. (FIIRO GAAR AH: Sababo aan la garanaynin qaladkani wuxuu ku dhacaa badanaa emaylka.)
Warka wanaagsani waa inuu yahay wax fudud oo si dhakhso leh u rogi kara ROI ee suuqgeynta iimaylka. Markaad fiirineysid olole emayl udub dhexaad u ah, ku bilow inaad isweydiiso afartan su'aalood:
Waa maxay hadafkeygu ololahan?
Miyuu boggeyga hal-abuurka iyo degitaanku la jaan qaadayaa himiladaas?
Dalabkeyga, bogga hal-abuurka iyo degitaanka miyuu macno u sameynayaa dhagaystayaashayda oo aniga kaligay maahan?
Sideen u cabbiri doonaa guusha ololaha, oo ma waxay la jaanqaadeysaa yoolka?
Maxaad isku dayeysaa inaad gaarto? Calaamadeynta? Diiwaangelinta? Baadhitaan iib ah? Iibsi deg deg ah? Wax kasta oo himiladaadu tahay, hubi in hal abuurkaaga, bogga soo degitaanka, iyo cabbiradaada dhammaantood ay la jaan qaadayaan hadafka oo macno ka sameynayaan aragtida dhagaystayaashaada (taas oo inta badan ka duwan taada).
Ujeeddadaadu ma tahay calaamadeyn? Emailku wuxuu si wax ku ool ah ugu guuleystaa yoolalka calaamadeynta muhiimka ah: wacyi gelinta, isku xirka farriimaha, u roonaanta, ujeedo iibsi, iwm. Waxaan ogaaday in xayeysiiyaasha badankood, gaar ahaan markay isticmaalayaan xayeysiinta e-warsidaha, ay guul weyn ku leeyihiin xayeysiinta calaamadeynta ee kanaalka emaylka. Hal-abuurradooda ayaa mashquul ku ah, astaantoodu waa mid caan ah, waxayna xoojinayaan farriimaha ay doonayaan inay daawadayaashu la midoobaan astaamahooda. Laakiin kala-goynta, marka ay jirto, waxay timaaddaa markii xayeysiiyuhu ku cabbiro ololaha qasabno ama halbeegyo kale marka hal-abuurka aan waligiis loogu talagalin inuu ka jawaabo noocaas jawaab ah. Calaamadda waxaa lagu cabiraa saameynta daawashada (ie, aragti) xayeysiiska uu ku leeyahay aragtida iyo ujeedka daawadayaasha, ee maahan jawaab degdeg ah. Bedelkeed isticmaal qiimayaasha furan sidii barometerkaaga.
Marabtaa booqashooyinka websaydhkaaga ama diiwaangelin cusub? Wanaagsan! Hubso inaad naqshadeyso hal-abuurkaaga si aad uga hesho jawaab noocaas ah. Haddii fariintaada xayeysiinta ay tahay, “WidgetTown: Qalabka ugu fiican ee hareeraha ku wareegsan. Halkan riix si aad inbadan u hesho. ” waxaa laga yaabaa inaad saameyn ku yeelatay aragtida calaamadaha rajada, laakiin uma badna inaad ku riixdid iyaga inaad gujiso. Maxay tahay sababta Waxay hayaan dhammaan macluumaadka ay u baahan yihiin, iyo wadada, haddii ay u baahdaan aalad, waxay u badan tahay inay ku soo wacaan. Laakiin iyagu ma riixi doonaan hadda ama iyaga, iyaga oo adeegsanaya waqtiyada aan fiicnayn, waxay leeyihiin baahi degdeg ah. Haddii ujeeddadaadu tahay diiwaangelin, sii daawadaha sabab uu ku riixo. Waxaad siisaa wax run ahaantii qiimo ku leh (iyaga).
Hadafkaagu ma yahay jiil hogaaminaya? Bogga dhiirigelinta iyo degitaanka ayaa hadda qayb muhiim ah ka ah ololahaaga. Hal-abuurku miyuu ku xidhmayaa bogga soo degitaanka? Dhiirrigelinta ma loo dallacsiiyay hal-abuurka si cad oo muuqata oo lagu muujiyay bogga degitaanka? Ma ku cadahay bogga soo degitaanka (iyo emayl) maxay rajadu tahay inay qabato marka xigta, iyo dhiirigelinta ma la xoojiyay? Ma jiraan waxyaabo ku mashquulinaya (marin hagis, iskuxirka shabakadaha bulshada, iwm.) Taas oo carqaladeyn doonta rajada laga qabo dhammaystirka hawsha? Kuwaan midkood waxay yareyn kartaa waxtarka ololaha jiilka hogaaminta waxayna yareyn kartaa tirada raadadka aad soosaarto.
Waxaa laga yaabaa in yoolkaagu yahay iibinta internetka. Ma tahay wax soo saar uu qof ku iibsan doono dareen ama waa in ololayaashaadu ay xuddun u noqdaan dhacdooyinka, sida ciidaha? Miyaad soo martay hawshii lacag-bixinta oo dhan? Ma nadiifbaa oo fudeyd, mise isku-buufis iyo qarsoodi? Miyaad dabagal ku haysaa gaadhiga ka tagista si aad u aragto halka dhibcuhu ka jiraan? Adeeg bixiyahaaga emaylka (ESP) ama xalka emailka gudaha miyuu taageeraa kicinta ka-tagista gawaarida? Miyaad dhigaysaa cookie ku jirta daalacayaasha booqdayaasha sidaas darteed haddii ay soo noqdaan dhowr maalmood ka dib oo ay soo iibsadaan badeecadaas, waad amaahan kartaa xayeysiiska soo saaray hoggaanka?
Dhanka kale, ha isku dayin inaad ku guuleysato yoolal badan hal olole. Waxay noqon doontaa sida futon oo kale? Ma samaynayo salooti aad u wanaagsan ama sariir aad u wanaagsan.
Kuwani waa wax yar oo ka mid ah waxyaabaha aasaasiga ah laakiin weligood jira ee saameyn ku yeelan kara ficilada la doonayo iyo markaa qiimeyntaada ROI ee ololahaaga iimaylka xisbiga 3aad. Kaliya xusuusnow, khadka udhaxeeya iyo emaylka guusha suuq geynta iyo guuldarada qaraabada ah ee ganaaxa. U adeegso talaabooyinkan si aad u hubiso in farriimahaaga iyo ujeeddooyinkaagu yihiin kuwo khadadka toos ah isla markaana aad isla markiiba u rogrogmi karto mitirka ROI-gaaga si aad uhesho.
Tags: niiko kellypostdhismaha kooxda
Hey Valley Boys, Xusuusnow ChaCha?